May 22, 2019 - MM Live News
နေပူပူမှာ ဇရစ်ဖူး ရောင်းပြီး ကျောင်းစားရိတ်ရှာနေတဲ့ သမီးလေး….
ဒီနေ့ကျေးလက်က သမီးငယ်တစ်ယောက် တောထဲကဇရစ်ဖူး ချိုးပြီးလိုက်ရောင်းနေတာတွေ့လို့ဝယ်ပြီးအားပေးလိုက်တယ်။ စကားစပ်မိလို့သူ့ဘဝမေး ကြည့်လိုက်မှ အာဂ ကလေးမှန်းသိလိုက်ရတယ်။သူဒီနှစ်လေးတန်းအောင်လို့ ဟိုဘက်ရွာအထက်တန်းကျောင်းသွားတက်ရမှာတဲ့ကျောင်းတက်ရင်လိုမဲ့ ကျောင်းစရိတ်ကိုရှာနေတာတဲ့…. သူ့စကားမဆုံးခင် ကျွန်တော့်ရင်စို့နှစ်လေပြီ ပညာလိုချင်ရှာသောကလေး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်သောကလေး။ သု့ဘန်းထဲကဇရစ်ရိုး ကျွန်တော်အကုန်ဝယ်လိုက်တယ်… သူဘန်းလေးပိုက်ပြီးထွက်သွားတော့ သူ့ကျောပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်းရင်ထဲမှာတော့ အတွေးများစွာ။သူလေးရဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးရိုးသားကြိုးစားတဲ့စိတ်လေးကို မြတ်နိုးလို့ နောက်တစ်ပတ်ကျွန်းခြံသွားတော့အဲ့ရွာက သူ့အိမ်ကိုသွားပြီး ကျောပိုးအိတ်ရယ် ဘောပင်ခဲတံ ပေတံ ကွန်ဘာဘူး စာအုပ်တွေ သွားပို့လိုက်ပါတယ်။Mya Winn unicode ဒီနကြေ့ေးလကျက သမီငယျတဈယောကျ တောထဲကဇရဈဖူး ခြိုးပွီးလိုကျရောငျးနတောတှလေို့ဝယျပွီးအားပေးလိုကျတယျ။ စကားစပျမိလို့သူ့ဘဝမေး ကွညျ့လိုကျမှ အာဂ ကလေးမှနျးသိလိုကျရတယျ။သူဒီနှဈလေးတနျးအောငျလို့ ဟိုဘကျရှာအထကျတနျးကြောငျးသှားတကျရမှာတဲ့ကြောငျးတကျရငျလိုမဲ့ ကြောငျးစရိတျကိုရှာနတောတဲ့…. သူ့စကားမဆုံးခငျ ကြှနျတေျာ့ရငျစို့နှဈလပွေီ ပညာလိုခငျြရှာသောကလေး ကိုယျ့အားကိုယျကိုးတတျသောကလေး။ သု့ဘနျးထဲကဇရဈရိုး ကြှနျတျောအကုနျဝယျလိုကျတယျ… သူဘနျးလေးပိုကျပွီးထှကျသှားတော့ သူ့ကြောပွငျကိုငေးကွညျ့ရငျးရငျထဲမှာတော့ အတှေးမြားစှာ။သူလေးရဲ့ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးပွီးရိုးသားကွိုးစားတဲ့စိတျလေးကို မွတျနိုးလို့ နောကျတဈပတျကြှနျးခွံသှားတော့အဲ့ရှာက သူ့အိမျကိုသှားပွီး […]
ဂျပန်နာမည်ကြီး အပြာမင်းသားကြီးနဲ့ ကိစ္စ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပြောပြီ #ApannPyay ဂျပန်အပြာမင်းသားကြီး ဂျပန်ဂတုံးဆိုသူနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် တို့အကြောင်းတစ်ချို့ကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ အကောင့်တစ်ခုကနေပြီး တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကောင့်သည် Jung Hong Kim ဆိုတဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကောင့်မှ တင်ခဲ့တာကတော့.. Mitsugu Somezima With Thin Zar Wint Kyaw. looking for companies sponsoring us. Don’t miss it… လို့ လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး..Mitsugu Somezima ဂျပန်ဂတုံး ဆိုသူအကောင့်မှ ရှယ်ယူပြီး “Will they be able to play together?” This isa[…]
သရေခေတ္တရာမြို့အနီးမှ ပေပင်ငယ်တို့သည် ယနေ့ထက်တိုင် အပင်ငယ်များ အဖြစ်မှ ဆက်လက်ကြီးထွားခြင်းမရှိဘဲ ရပ်တည်လျက်ရှိသေးသည့် ပန်ထွာဧကရီ (ခေါ်) ယောကျာ်းမုန်းဝါဒီဘုရင်မ၏ ကျိန်စာ…
ပန်ထွာဧကရီ (ခေါ်) ယောကျာ်းမုန်းဝါဒီဘုရင်မ နှင့်ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးရဲ့ မှတ်တမ်း။ တကယ်တော့ မြန်မာ့ရာဇ၀င်ထဲမှာ အမျိုးသားတွေပဲ ရာနှုန်းပြည့် နေရာယူထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထူးချွန်ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထဲကမှ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ အစောပိုင်းကာလ ဖြစ်တဲ့ ပျုခေတ်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဗိဿနိုးဘုရင်မ ပန်ထွာဧကရီ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးပဒေသရာဇ် ခေါင်းဆောင် အကြောင်းကို ကျနော်သိသလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်..။ သရေခေတ္တရာပြည်တွင် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး အုပ်စိုးနေစဉ်ကာလအတွင်း ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်အဖြစ် ဗိဿနိုးပြည်တွင် ပန်ထွာဘုရင်မက အုပ်ချုပ်နေခဲ့သည်။ ရာဇ၀င်ကျမ်းများအရ “ပြည်” ဟုသုံးနှုန်းရသော်လည်း အမှန်မှာ မြို့ပြနိုင်ငံ ( city-state) အဆင့်မျှသာဖြစ်ပါသည်။ ပန်ထွာဘုရင်မသည် လူသာမန်မဟုတ်ချေ။ ခမည်းတော်မှာ တကောင်းမင်းကြီး၏သားတော်အရင်း မဟာသမ္ဘ၀ ဖြစ်ပြီး မယ်တော်မှာ စန္ဒမုခိဘီလူးမ ဖြစ်သည်။ တကောင်းမင်းကြီးက မျက်မမြင်သမ္ဘ၀ညီနောင်ကို ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်းမျှောလိုက်ရာ […]
သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်အပြာမင်းသားကြီး ပြောပြီ…..
ဂျပန်အပြာသရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mitsugu Somezima ဟာ ဂျပန်အပြာလောကမှာရေပန်းစားလူသိများတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ဂျပန်ပြည်မှာတွင်သာမက အာရှတိုက်တစ်ဝိုက်မှာပါ ပရိတ်တစ်ချို့ကို ရရှိထားသူလဲဖြစ်ပါတယ်။ Mitsugu Somezima ရဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ဦးမှမြန်မာထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့အတူရိုက်ကုးစေချင်တယ်လို့ ရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုက တော်တော်လေးပျံ့နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့စ်မှာ ရေးသားထားတာကတော့“ဂျပန် မှ မင်းသားMitsugu Somezima နဲ့ မြန်မာမင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့အတွက် စပွန်ဆာကုမ္ပဏီကို လိုက်ရှာနေတယ်”လို့ရေးသားထားတာပါ။ အဲ့ပို့စ်ကို Mitsuga Somezima က သဘောကျက သူရဲ့လူမှုစာမျက်နှာမှာ အခုလိုပြန်လည်မျှဝေထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ… Credit – padonmar unicode ဂပြနျအပွာသရုပျဆောငျမငျးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့ Mitsugu Somezima ဟာ ဂပြနျအပွာလောကမှာရပေနျးစားလူသိမြားတဲ့ သရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။သူဟာ ဂပြနျပွညျမှာတှငျသာမက အာရှတိုကျတဈဝိုကျမှာပါ ပရိတျတဈခြို့ကို ရရှိထားသူလဲဖွဈပါတယျ။ Mitsugu Somezima ရဲ့ပရိတျသတျတဈဦးမှမွနျမာထိပျတနျးမငျးသမီးတဈဦးဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျ […]
ကားခမပါလို့မန္တလေးကနေ မကွေးကို နေပူကျဲကျဲကားလမ်းမပေါ်မှာ ဖိနပ်မပါပဲ ရောက်သလောက်ခြေလျှင်လျှောက်တဲ့ သားမိနှစ်ယောက်….
ကြွားတာမဟုတ်ဘူး ….အချို့ဘဝတွေအတွက်စိတ်မကောင်းပီး ကိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် ပီတိဖြစ်လို့ပါ။ နေ့ခင်း ၁၁း၃၀ လောက် ကိုယ်တယောက်ထဲခရီးကအပြန် နေပူကျဲကျဲကားလမ်းမပေါ်မှာ ဖိနပ်မပါ ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့အသက်၂၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိမဲ့မိခင်တယောက် ၃နှစ်သားအရွယ်ကလေး လက်ဆွဲသွားနေတာတွေ့တော့ …… ကားပြန်ကွေ့ပီးဒီလောက်နေပူပူ ဖိနပ်ဘာလို့ မပါလဲမေးတော့ဖိနပ်ပြတ်သွားလို့တဲ့ ….ခြေထောက်ပူလွန်းတော့ သူ့မျက်နှာက မဲ့ရှုံ့နေတာဘဲ လမ်းလျှောက်လာတဲ့ခရီးမေးကြည့်တော့ မြစ်ငယ်တံတားကနေ ဆိုတော့ မိုင် ၃၅လောက်ရှိတယ် …. အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဖိနပ်ချွတ်ပေးပြီး ကားပေါ်တင်ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကားပေါ်မှာ ချွေးနံ့တော့ တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်။ကားထဲကရေဗူး ရေသောက်တာ တဗူးလုံးကုန်သွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ကားဂိတ်ထိခေါ်လာပြီး ထမင်းဆိုင် ထမင်းကျွေးတာ ဆာလွန်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ တုန်နေတာ ၄ ပုဂံတောင်ကုန်တယ်။ မန္တလေးကို အလုပ်သွားရှာတာ ကလေးပေါက်စပါလို့ အလုပ်မရလို့ပြန်လာတာတဲ့။ ကားခမပါလို့မန္တလေးကနေ မကွေးကို ရောက်သလောက်ခြေလျှင်လျှောက်မှာဆိုတော့ ကူမဲ မကွေးကားကလည်း ထွက်သွားပြီ မရှိတော့ဘူး ဆိုတော့ ကူမဲ မိတ္ထီလာ […]
ပူလွန်းလှတဲ့ မန္တလေးနွေ ၂၂-၅-၂၀၁၉နေ့(၀၂း၄၆)နာရီ။ မေလ(၂၃)ရက်နေ့ခန့်မှစတင်ကာ မုတ်သုံလေဦးနဲ့အတူ မိုးတိမ်တောင်များကြောင့် ….. နေရာကွက်ကျားထစ်ချုန်းမိုးများစတင်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဒေါက်တာထွန်း လွင် (ဖားတွေအသံမှထွက်ပါဦးမလား) unicode ပူလှနျးလှတဲ့ မန်တလေးနှေ ၂၂-၅-၂၀၁၉နေ့(၀၂း၄၆)နာရီ။ မလေ(၂၃)ရကျနခေ့နျ့မှစတငျကာ မုတျသုံလဦေးနဲ့အတူ မိုးတိမျတောငျမြားကွောငျ့ ….. နရောကှကျကြားထဈခြုနျးမိုးမြားစတငျရှာသှနျးနိုငျပါတယျလို့ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ ဒေါကျတာထှနျး လှငျ (ဖားတှေအသံမှထှကျပါဦးမလား)
လာဘ်ပွင့် အိမ်အေးအောင် ဒါတွေ လုပ်လိုက်ပါ…..
လာဘ်ပွင့် အိမ်အေးအောင် ဒါတွေ လုပ်ပါ (၁) ဘုရားပန်း နှင့် သောက်တော်ရေ ၊ဆွမ်း ၊ဆီမီး အမြဲကပ်ပါ။ ဘုရားပန်း မနွမ်းပါစေနဲ့၊ဘုရားပန်းအိုးထဲမှ ရေများ မပူပါစေနဲ့၊သောက်တော်ရေကို သတိရတိုင်းကပ်ပါ။ (၂)ဘုရားရှိခိုးလျင် အိမ်စောင့်နတ် ခြံစောင့်နတ် အိမ်ဝန်းအတွင်းမှီတင်းစောင့်ရှောက်နေထိုင်ကြသော နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများမြင်အပ် မမြင်အပ် သတ္တဝါများ အားလုံးကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပါ။ (၃)အလွန် ကံညံ့ လာဘ်ပိတ်နေလျှင်ညသန်းခေါင် ပရိတ်ရွတ်ပါ၊ည (၁၂) နာရီနောက်ပိုင်းသည် နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ လူ့ပြည်သို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုချိန်ဖြစ်၍ ညဘက် ပရိတ်ရွတ်ဖတ် ဆုတောင်းလျင် ပို၍ ဆုတောင်းပြည့်စေပါတယ်။ (၄)အိမ်မှာ အဟောင်း အစုတ်တွေ မထားပါနဲ့။ အချို့အိမ်တွေမှာ နှမြောပြီးထားတတ်ကြတာတွေ ရှိပါတယ်၊ပုလင်းကွဲတွေ ဒန်အိုးပေါက်တွေ အဝတ်အစားအစုတ်တွေဘယ်လိုမှ သုံးမရတာတွေ လွှတ်ပစ်လိုက်ပါ။အိမ်မှာလိုအပ်တာတွေသာ အဓိက ထားပါ။ (၅)အိမ်ကို တံမြက်စည်းလှည်းလျှင်နံနက်လှည်းလျှင် အိမ်ရှေ့မှ […]
ရန်ကုန်တိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ မျက်နှာကို အိုးမည်းသုတ်လိုက်တဲ့ YBS6YBS6လှိုင်သာယာ ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး ဂိတ်စမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ 19-May-2019 1:19PM လောက်မှာ YBS6စီးဖို့ ကားပေါ်တက်ပါတယ်။ ခုံအားလုံးနီးပါး လူပြည့်နေပါပြီ။ ကားဒရိုင်ဘာမှ လူအားလုံးရဲ့ ယာဉ်စီးခကို ပိုက်ဆံဘုံးထဲ အထည့်မခံပဲ သူလက်နဲ့ အကုန်ယူထားပါတယ်။ ကျွန်မက ကားခ ၂၀၀တန်ကို ပိုက်ဆံဘုံးထဲ ထည့်မယ်လုပ်တော့ အထည့်မခံပါဘူး။ ကျွန်မလည်း ၃ခါလောက် ငြင်းပြီး ပိုက်ဆံဘုံးထဲပဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ထိုင်ခုံကို ထိုင်မယ်အလုပ်မှာ ငါတို့ဒီတစ်ယောက်ကြောင့် အတိုင်မခံနိုင်ဘူး ပြောသံကြားလိုက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်မကိုလာပြီး အစ်မပိုက်ဆံ ၂၀၀ ပြန်ယူပါ ကားပေါ်က ဆင်းသွားပြီး နောက်တစ်ခြားကားကို ပြောင်းစီးပါ ပြောပါတယ်. ပိုက်ဆံဘုံးစနစ်ထဲ […]
နေ့အပူချိန်များ နောက်(၃)ရက်အထိ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဆက်မြင့်တက်မည်
နေ့အပူချိန်များ နောက်(၃)ရက်အထိ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဆက်မြင့်တက်မည် နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်နေသည့် အခြေအနေသတင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၁)ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက် ) (က) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၈)ရက်နေ့မှစ၍ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေ့အပူချိန်များသည် မေလ၏ ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက် (၇)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ (၈)ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ လည်းကောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တို့တွင် မေလ၏ ပုံမှန် အပူချိန်တို့ထက် (၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ (၇)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အထိလည်းကောင်း၊ မြင့်တက်လျက်ရှိရာ အဆိုပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် နောက်(၃)ရက်အထိ နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းရပါသည်။ (ခ) သို့ပါ၍ အဆိုပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် […]